Muuri News Network » XOG: Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Shabellaha hoose Mudane Xasan Shiine oo sheegay..
XOG: Gudoomiye kuxigeenka Gobolka Shabellaha hoose Mudane Xasan Shiine oo sheegay..
Warar ay heshay shabakadda Muurinews.com ayaa sheegaya in madaxda maamulka gobolka shabeelaha hoose ay qorsheenayaaan In dhawaanahan ay gaarsiiyaan gargaar bani-aadanimo degmooyinka Marka, Lambar Konton,Muurin iyo deegaanada hoostaga.
Kadib markii ay booqasho shaqo kutageen degmada Marka iyo deegaanada ku hareereesan 2wafdi oo ka socday dowlad goboleedka koonfurgalbeed soomaaliya ayaa u kuurgalay xaaladda nololeed ee kajirta deegaanadaas, iyagoo sheegay in ay ka jirto xaalad bani-aadanimo oo aad u liidato dadkuna ay u baahanyihiin in si degdeg ah wax loola soo gaaro.
Gudoomiye ku xigeenka gobolka shabeelada hoose xagga siyaasadda iyo maamulka Mudane Xassan Abuukar Jimcaale( Xasan Shiine) ayaa u sheegay bulshada ku dhaqan deegaanadaas in ay soo gaarsiin doonaan gargaar bani-aadanimo maalmaha ugu horeeya ee Bisha barakeesan ee Ramadaan.
Gudoomiye ku xigeenka ayaa maalmahan waday dadaalo nabadeed iyo kuwo bani-aadanimo uu wax kaga qabanayo xaaladaha nololeed ee deegaanadaas. Isagoo maalmo badan la qaatay kulamo aan loo kala kicin dhamaan waxgaradka, haweenka iyo duqoowda degmada Marka.
Isha wararka oo dhan muurinews.com